China A80 Steel Truss Lattice Girder ee warshadda Carport iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
A80 Bir-dhismeed bir-dhismeed girder-garab waa habka taageerada macdan, laga helay saqafka hoostiisa si loo bixiyo taageero.Guud ahaan, saqafka saqafka ayaa laga sameeyaa laba walxood, bir iyo alwaax.
Birta birta ah ee leh birta birta ah sida xudunta sare, xudunta hoose iyo xubnaha shabakada oo ay ku xidhmaan alxanka dhibcaha iska caabinta waxaa loo yaqaannaa birta.Birta birta ah ee laga sameeyay qaab dhismeedka birta ayaa ah doorashada guud ee ganacsiga, warshadaha iyo dhismayaasha waaweyn ee la deggan yahay.
1) Qalabka: HRB400
3) Daaweynta dusha sare: galvanized.
4) Fasalka: A80
5) Dhererka: 3-12m, sida looga baahan yahay macaamiisha
6) Dhexroorka kooraska sare: 8mm
7) Dhexroorka xudunta hoose: 6mm
8) Dhexroor siligga diagonal: 4mm
9) Balladhka: 80mm
10) Dhererka: 80mm
11) Kala dheeraynta alxanka: 200mm
12) Baakad: baakad u qalanta badda caadiga ah
Faa'iidooyinka Dhaqaalaha: Habka truss waa mid macquul ah oo leh qiimo jaban wuxuuna leeyahay faa'iido muuqata oo ku taal aaggan;Waxaa loo qaabayn karaa sidii sagxad laba-dhinac ah.
Ku habboon: Gaabi wakhtiga dhismaha mashruuca;Yaree taageerada ku meel gaadhka ah.
Ammaanka: Waxqabadka wanaagsan ee iska caabinta dildilaaca iyo iska caabinta dabka;
Kalsoonida: hanti wanaagsan si looga hortago dhulgariir.
(1) Iftiinka miisaanka, xoojinta sare, awoodda loading weyn iyo sidoo kale awoodda wanaagsan ee ka hortagga dhulgariirka.
(2) fudud ee hawlgalka dhismaha, fududahay in la rakibo.
(3) Waxay u dhaqmi kartaa sidii qayb ka mid ah qaab dhismeedka miisaanka qaadista, si loo dhimo qiimaha alaabta.
(4) Dhig guddiga kor ku xusan sibidhka shabagga siliga welded dhexdooda.
(5) Noocan ah xaashida sagxadda sagxadda sagxadda dunta birta ah waxay leedahay khilaaf xooggan oo u dhexeeya sibidhka iyo sagxada sagxadda, isagoo u adkaysta dabka.
(6) Birta birta ah waxay ku xiran tahay bar birta, taasoo ka dhigaysa inay leedahay xoogga sare.
1) Lagu dabaqay saqafyada hore loo saaray, hurdo tareen-xawaaraha sare ka hor.
2) Waxaa loo adeegsaday dhismayaal bir ah oo dhaadheer, kuwa aadka u sarreeya
3) Loo isticmaalo dhismaha birta, dabaqa mezzanine ee "LOFT"
4) Xoogga lagu dabaqay kakan, qaab-dhismeedka gaarka ah, dhismaha
5) Dhismayaasha qaabdhismeedka gudaha ee goobta lagu isticmaalo (RC).
6) Loo isticmaalo dhismaha qaab dhismeedka saqafka jiirada